အရှက်ကင်းမဲ့ခြင်းမှာလည်း အတိုင်းအတာဆိုတာရှိရမယ် | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
အရှက်ကင်းမဲ့ခြင်းမှာလည်း အတိုင်းအတာဆိုတာရှိရမယ် ဒေါက်တာအေးချမ်း
အမ်၊ အက်စ်၊ အဏ္ဏ၀ါ
အသိ ဥာဏ်ပြည့်ဝတဲ့၊နှ လုံးသားဖြူ စင်တဲ့သူ တစ်ယောက်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည် နယ်မှာ ရိုဟင် ဂျာတွေ နဲ့ ကမန်တွေ အပေါ် အစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ် မှုတွေဖြစ်နေကြတာ ရှစ်လတောင် ရှိနေပြီ ဆိုတာ သိနေမှာပါ။ ဒီလို အစုလိုက်အပြုံ လိုက်သတ်ဖြတ်မှုတွေကိုပြည်ထောင်စု အစိုးရနဲ့ ရခိုင် အ စွန်းရောက် အစိုးရ တွေပူးပေါင်းပြီး နိုင်ငံရေး အမြတ် ထုတ်ဖို့ လုပ်နေ တယ် ဆိုတာကို လည်း မကြာ ခဏ သက်သေပြခွင့် ရတဲ့အချိန်တွေရှိခဲ့၊ ရှိနေပါတယ်။ ခိုကိုးရာမဲ့နေတဲ့ ဒီလူတွေဟာသူတို့ အပေါ်မှာ ကျရောက်နေတဲ့ မဟာကြီး မားတဲ့မတရားမှုတွေ နဲ့ရက်စက်မှုတွေကို ဖယ်ရှားနိုင်ဖို့အတွက် ကမ္ဘာကြီး သိအောင်ငိုကြွေး လျက်ရှိနေကြ တယ်။ လူသားချင်းစာနာ တဲ့အနေနဲ့ သူတို့တွေ အပေါ် သနား ညှာတာ ရမယ့်အစား၊ မြန်မာ အသိုင်း အ၀ိုင်းက မသိမနား လည်သူတွေ၊ ပညာမတတ်သူတွေ၊ အမျိုး သားရေး စိတ်ဓာတ်လွန်ကဲ သူတွေနဲ့ လူမျိုး ကြီးဝါဒ ကိုင်စွဲထားတဲ့သူတွေက ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ ကမန်တွေ အနေနဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ အခြေ အနေတွေကို မခံနိုင်ဘူး ဆိုရင် ရခိုင်ပြည် ကထွက်သွားဖို့ ဘဲလူ မဆန်စွာ နဲ့ အဓိ ပ္ပာယ် မရှိ တာ ကိုသာပြောနေကြတယ်။
အခုအချိန်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မိတ်ဆွေမဲ့နေတဲ့ ဒီအသိုင်းအ၀ိုင်းနှစ်ခုကို မျိုးဖြုတ်အောင်လုပ်နေခြင်း ရဲ့ နောက်ကွယ်ကပြဿနာအရင်းအမြစ်တွေ ကိုနိုင်ငံတကာကလည်းကူညီရှင်းမပေးကြဘူး။ ရိုဟင်ဂျာတွေ နဲ့ကမန်တွေအုတ်အုတ် သောင်းသောင်းအသံတွေနဲ့ ငိုကြွေးနေတာတွေဟာ နားထိုင်းတွေရှေ့လုပ်နေ သလို ဖြစ်နေကြ တယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ကိုယ့်အတွက်ဘဲ စဉ်းစားတဲ့တစ်ကိုယ်ကောင်းသမားတွေ အရင်းရှင် ၀ါဒီတွေကစိုးမိုးခြယ်လှယ်နေတဲ့ ဒီနေ့ကမ္ဘာကြီးမှာသေ လုနီးပါးဖြစ်နေကြတဲ့ ဒီလူတွေဆီက သူတို့အတွက် ဘာမှ အကျိုးအမြတ်မှ မရနိုင်ဘူးဆိုတာ သိနေလို့ပါ။ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးတွေကို မတူညီ တဲ့လူမျိုးစုနဲ့မတူညီတဲ့ဘာသာ ကိုးကွယ်မှုတွေကြောင့် မုန်းတီးပြီးညှင်းပန်းနှိပ်စက်နေတာ ဆယ်စုနှစ်များ စွာရှိခဲ့ပါပြီ။ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစုသာ လျှင်တစ်ခုတည်းသော၊ မြန်မာပြည်ရဲ့လူများစု မျိုးနွယ်တိဘက်တို-ဗမာအနွယ် လူမျိုးစုတွေ ထဲက မဟုတ်တဲ့ ရခိုင်ပြည်ရဲ့မူလ ဘူတအိန္ဒိယ အနွယ်လူမျိုးစုဖြစ်ပါတယ်။ ရိုဟင် ဂျာတွေဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ မူလဘူတ Proto-Australoid Negritos နှင့် Indo-Aryan မူရင်းဇစ်မြစ်ကနေ ဆင်း သက်လာပြီးတော့ နောက်ပိုင်းမှ ဝင်ရောက် အခြေချလာတဲ့ လူမျိုး အနွယ် စုတွေ နဲ့ရောထွေးပြီးဖြစ်ပေါ် လာသော လူမျိုးဖြစ်ပြီး၊ ၇၈၈ CE မှစတင် ပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာ ကိုပြောင်းလဲ ကိုးကွယ် ခဲ့သူ များဖြစ်ကြတယ်။ အဲဒီProto-Austral-oid Negritos နဲ့ Indo-Aryan တွေဟာ ဟိန္ဒူ၊ မဟာယန ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ နတ်ကိုးကွယ် သူဖြစ်ခဲ့ကြပေမယ့်၊ ဒီနေ့ရခိုင်လူမျိုး ဖြစ်နေ တဲ့တိဘက် တို ဗ မာနွယ်တွေ လိုတော့ မဟုတ်ခဲ့ဘူး။
ရခိုင်ပြည်မှာ မွန်ဂိုလီယန်တွေရဲ့ ကျူးကျော်မှုက ၉၅၇ CE မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး၊ ဟိန္ဒူမင်း ဆက်ဖြစ်တဲ့ အိန္ဒိယ ဘုရင့်နိုင်ငံ ကိုဖြုတ်ချနိုင် ခဲ့တယ်။ မူရင်းဌာနေဖြစ်တဲ့ အင်ဒို-အာရီယန်တွေနဲ့ လက်ဆက် မှုတွေကြောင့် အင်ဒို-မွန်ဂိုလွိုတ် လူမျိုးစုဖြစ်ပေါ် လာခဲ့တယ်။ အဲဒါကြောင့်အဲဒီအင်ဒို-မွန်ဂိုလွိုတ်တွေနှင့် မွန်ဂိုလီယန် ကျူးကျော် သူတွေဟာ ဒီနေ့ရခိုင် လူမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင် မူရင်းဇစ်မြစ်ချတည်ထောင် သူတွေဖြစ် တယ်။ အဲဒီလူတွေ ဟာနောက် ပိုင်း ကျူးကျော်လာတဲ့ ဗမာ လူမျိုးတွေနဲ့ရောထွေး လာတယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေ ဟာရခိုင်ပြည်ရဲ့ မူရင်း ဌာနေအနွယ်တွေက ဆင်းလက်လာတဲ့ လူမျိုးတွေဖြစ်ပေမယ့်လည်း ကိုးကွယ် တဲ့ဘာ သာကြောင့် တရား မ၀င်ခိုးဝင်လာတဲ့ ဘင်္ဂလီများအဖြစ်သမုတ်ခံနေရတယ်။ ရိုဟင်ဂျာနဲ့ ဘင်္ဂလီတွေဟာ တူညီတဲ့ လူမျိုးနွယ် စု တော့ မဟုတ်ပေ မယ့်၊ တူညီတဲ့မူ ရင်းဇစ် မြစ်ကဆင်း သက်လာတဲ့ အနွယ်ဝင်တွေဖြစ်ကြတယ်။ သို့သော် လည်းမြန်မာနိုင်ငံက ဖက်ဆစ်တွေနဲ့ နာဇီလက်သစ်တွေကတော့ သူတို့ရဲ့လူမျိုး၊ ဘာသာနဲ့ နိုင်ငံသာလျှင် အမှန်ကန်ဆုံးလို့တွေးကြတယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ လူသား အဓိကြ ပုဝါဒီ သာဖြစ် ပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် ရိုဟင်ဂျာတွေကို သူတို့နဲ့ မတူညီတဲ့ အပေါ်အခြေခံပြီး သူတို့ အပေါ်ကြီး မားတဲ့ပြစ်မှုကြီးတွေ ကျူး လွန်ပြီး နိုင်ငံတွင်းက ထွက်သွားဖို့ ဖက်ဆစ်တွေတောင်း ဆိုနေခြင်းဟာ ရယ်ချင်ဖွယ်ရာ၊ ထင်ယောင် ထင်မှားဖြစ်အောင်ခြင်းနဲ့ လူမဆန်ခြင်းတို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ဖက်ဆစ်တွေအတွက် ကတော့ သူတို့တူတဲ့ လူတွေသာလျှင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသား များဖြစ်နိုင်တယ်။ အဲဒီတော့ အသင် သူတို့ကိုဘယ် လိုခေါ်မလဲ? ကျွန်တော်ကတော့ အရှက်မရှိတဲ့ ဖက်ဆစ်တွေလို ဘဲခေါ်မှာပါ။ အောက်မှာဖော်ပြထား တာကတော့ လူမျိုးရေး ခွဲခြား ဆက်ဆံတဲ့ ရခိုင် ဖက်ဆစ်များရဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေ အပေါ်အမြင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါ ကတော့ ပညာရှင် လို့ပြောတဲ့ တစ်ယူ သန်ဝါဒီ တစ်ယောက်ရဲ့ အမြင်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
“ဒါက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘိုးဘွား ဘီဘင်ပိုင်တဲ့မြေပါ။ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ဘယ် ALIEN တိုင်း တစ်ပါး သားကိုမှ ခွဲဝေ မပေးနိုင်ဘူး။ ကျွန်တော် ကတော့ မွတ်စလင် ဆန့်ကျင်ရေးသမား (သို့မဟုတ်) အစ္စ လာမ်ဆန့် ကျင်ရေးသမား မဟုတ်ပေမယ့် လူတွေကတော့ အခုကြောက်နေကြတယ်။ နိုင်ငံ (သို့မ ဟုတ်) ပြည်နယ်က ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကာကွယ်ဖို့နဲ့ လူတွေရဲ့ကောင်း ကျိုးအတွက် ကာကွယ်ဖို့ တာဝန် ရှိတယ်”
၈ သိန်း (သို့မဟုတ်) ဒီထက် များတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူကို ဘယ်လို လုပ်မလဲလို့မေးတော့ “ဒီမေးခွန်းကအလွန် ခက်ခဲတဲ့မေး ခွန်းဖြစ်ပြီးတော့ အရမ်းကို ရှုပ်ထွေးတဲ့ပြဿ နာပါ။ လူတိုင်းမှာ လူ့ အခွင့် အရေး ရှိတာ ကျွန်တော် သိတယ်။ အဲဒီမှာ လူ့အခွင့် အရေးရှိတယ်။ သူတို့မှာ လူ့အခွင့်အရေး ရှိကို ရှိရမယ်။ သို့သော် တစ်ခါတရံ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့လူ့အခွင့် အရေးကတော့ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ဖွဲ့စည်းအုပ် ချုပ်ပုံ နဲ့အချုပ် အခြာအာဏာကို လာပြီး အချင်းဖြစ်ပွားစေတယ်ဆို တာသဘောပေါက်ရမယ်”
(ဒေါက်တာအေးချမ်း – စုပြုံကျလာတဲ့ ရောဂါပိုးမွှားများ (Influx Viruses) – ရခိုင်ပြည်ရဲ့ တရားမ၀င် မွတ်စလင်များ – စာအုပ်ကို ပူးတွဲရေးသားခဲ့သူ – ဂျပန်နိုင်ငံ Kanda University ကပါမောက္ခဖြစ်ပါ တယ်)
အောက်ပါ အချက်အလက်တွေကို ကော်နုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၁) ရိုဟင်ဂျာတွေက ALIEN တိုင်းတစ်ပါးသားတွေလား? အဲဒီလိုဆိုရင် ALIEN ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆို ချက် က ဘာလဲ?
(၂) မြန်မာနိုင်ငံက ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဘဲ ကာကွယ်ဖို့ တာဝန်ရှိတာလား? နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ ဟိန္ဒူ၊ ခရစ် ယာန်၊ အစ္စလာမ်၊ ဆစ်ခ်ဘာသာတွေအတွက် ကျတော့ဘယ် သူ့မှာတာဝန်ရှိလဲ?
(၃) လူတွေရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်လား? ဘယ်လူတွေအတွက်လဲ? တိဘက်တို-ဗမာမူရင်းဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓ ဘာ သာဝင်တွေအတွက်ဘဲလား?
(၄) အဲဒီမှာ လူ့အခွင့်အရေး ရှိတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ လူ့အခွင့်အရေး ကနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ အချုပ်အ ခြာအာဏာကို အချင်းဖြစ်ပွား စေတာလား? လူ့အခွင့်အရေးကို တန်ဖိုးမထားတဲ့ လူ့အခွင့် အရေးအပေါ် အခြ မခံတဲ့ နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ အချုပ်အာဏာမျိုးဟာ ဘယ်လိုအမျိုးအစားလဲ့။ အဲ့ လိုနိုင် ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ အချုပ်အာဏာ မျိုးရှိသင့် စရာလား။
ဒေါက်တာအေးချမ်းဆိုတာ ရခိုင်အသိုင်း အ၀ိုင်းထဲမှာ သမိုင်းပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ ပညာရှင် တစ်ယောက် ဖြစ်ပါ တယ်။ တကယ်လို့ ပညာရှင် တစ်ယောက် အရှက်မရှိဘဲ လိမ်နေမယ်၊ များမြောင် စွာပြုမှုနေမယ် ဆိုရင် စာမတတ်တဲ့ ရခိုင်တွေ ဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲ? အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ အမှန်တရား ကဒေါက် တာ အေးချမ်းရဲ့ဖခင် က ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် BARUA (မြန်မာကြီး) အသိုင်းအ၀ိုင်းကဖြစ်ပြီးတော့ ရခိုင်ပြည်မှာ ၁၉၅၀ ဝန်းကျင် မှာအခြေချခဲ့ တာဖြစ်တယ်။ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု မှာပါဝင်ခဲ့ သူလည်းဖြစ်တယ်။ အဲဒီ BARUA (မြန်မာကြီး) နဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေ ဟာရုပ်သွင်ပြင် လက္ခဏာနဲ့အ ပြောအဆို၊ ယဉ်ကျေးမှု အားဖြင့် လွန်စွာနီးစပ် ပါတယ်။ တစ်ယူသန် ၀ါဒီတွေက အရှက်ကင်းမဲ့ ပါတယ်။ အရှက် ကင်းမဲ့ခြင်းဟာလည်း တစ်ယူသန်ဝါဒီတွေရဲ့ ပင်ကိုယ် သဘာဝတစ် ခုတော့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
(အခုတော့ ကမ္ဘာကြီးက အမှန်တရားကို သိနေပါပြီ။ ကမ္ဘာကြီးက ရိုဟင်ဂျာနဲ့ ကမန်တွေက ဘယ်သူတွေ လဲဆိုတာ သိနေပါပြီ။ အဲဒီလိုသိနေတဲ့ တိုင်အောင် သူတို့ဒီပြဿနာရဲ့ အရင်းအမြစ် ကိုဖြေရှင်းဖို့ရောက် မ လာတာ ကတော့ သူတို့ကိုယ်တိုင် စိတ်ဝင်တစားဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းအရာထဲမှာ မပါလို့ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ရိုဟင်ဂျာတွေက ဆက်လက်ရှင်သန်ချင်တယ်ဆိုရင် သူတို့အနေနဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ ဖိနှိပ်ခံခဲ့ ရသူတွေနဲ့ ဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့ သူတွေဘယ်လို ဆက်လက်ရှင်သန်အောင် လုပ်နေသလဲ ဆိုတာကိုသေ ချာ လေ့လာသင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။)
အမ်၊ အက်စ်၊ အဏ္ဏ၀ါသည် နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားသူ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ မလေးရှားနိုင်ငံတွင်ပညာသင်ကြားနေ သူဖြစ်သည်။
← “အစ္စလာမ်ဘာသာကို သက်ဝင်ယုံကြည်လာသူ British အမျိုးသမီး တစ်ဦး အကြောင်း”	ကြားဖြတ်သတင်း – အပြစ်မဲ့ကလေး (၄) ဦးကိုသတ်ဖြတ်ပြီး မိခင်ကိုဖမ်းဆီးသွား →